Ny Herinandro Tao Bahrain · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2017 9:07 GMT
Stravinsky no voalohany nitatitra ny zava-nitranga, taorian'ny soso-kevitra avy amin'ny namana tao New Jersey, Etazonia.
Noho ny Aterineto, mivezivezy haingana ny vaovao amin'izao fotoana izao, mahatonga an'izao tontolo izao ho toerana kely kokoa. Silly Bahraini Girl ao Canada nilaza ny fientanentanany mikasika ny diany nody rehefa avy nanao vakansy ary malok'ilay loza nitranga, izay nofaritany fa andro mainty iray hafa ao Bahrain.
Nitaintaina ihany koa i Tito Kayak, manoratra ao amin'ny Blame in on Bahrain, raha nampahafantatra azy ilay loza nitranga ny mpiandry varavarany, rehefa avy nandany ny hariva mahafinaritra tao amin'ny La Fontaine Centre for Contemporary Arts.
Mamintina ny eritreriny eto izy, mampahatsiahy antsika indray fa lasa marefo sy tsy andairan'aretina tampoka isika:
Tonga tany an-trano aho avy eo ary nanontany ahy ilay mpiambina amin'ny alina hoe: “Henonao ve ny momba ilay sambo nilentika?” Toa tsy nankafy ny takarivany tao Bahrain tahaka ahy ny olona sasany. Mandinika izao tontolo izao, amin'ny fieritreretana fa mety hitranga roa na telo kilaometatra miala amin'ny fotoana mahafinaritry ny olona hafa izany zava-doza izany. Ny tiako lazaina dia hoe tsy hananana fotoana tsara ihany no ahatongavany aty… fa tsy afaka manome tsiny ny tenako noho ny tsy fahafahana manampy koa aho, sa tsy izay? Mety ho tsy mamela heloka indraindray ny fiainana, na dia ao Bahrain kely aza.
Mankany amin'ireo izay namoy havan-tiana tamin'ny sambo ny foko.
Amin'ny kolontsaina sy ny zavakanto, mitaraina noho ny fahafatesan'ireo boky Arabo taorian'ny fitsidihana tsenaben'ny boky natao tao Bahrain i Manama Republic. Mitondra antsika amin'ny fitsidihana literatiora tao amin'ny fampiratiana izy, manaingo ny lahatsorany amin'ny fomba fijery mahagaga mikasika ny tsenabe, boky sy ny olona miady varotra.
“Tsenaben'ny Boky Arabo iray hafa natsangana sady tsy araka izay nantenaina,” hoy ny nosoratana.
“Raha hoy ny fanontaniana: inona no karazana famokarana ara-tsaina azontsika antenaina amin'ny fepetra tsy mahomby ara-toekarena / ara-politika / ara-teolojika, mety ho mora hita ao amin'ny tsenaben'ny boky Arabo akaiky indrindra ny valiny (Jordan no hany manana lahatahiry azo jerena), mandany vola kely kokoa amin'ny boky noho ny amin'ny lakozia ny olona “, hoy izy nanohy.
Ay! Maharary izany .. saingy izany no zava-misy mahatonga ny fo rotidrotika tamin'ny tatitr'i Haitham Sabbah momba ny traikefa mahatsiravina niainan'ilay vehivavy Palestiniana izay ny hody an-tanindrazana no hany faniriany eo amin'ny fiainana.
“Nanamarina indray aho tao amin'ny sisintany Jordaniana, noraisiko indray ny poketrako ary nanomboka nandeha aho. Tsapako fa nihamaivana ny kitapoko, tsy dia mavesatra loatra noho ny teo aloha, mbola teo amin'ny masoko ny ranomaso, saingy matanjaka kokoa ny tongotro, matanjaka aho, mahatonga ahy mahatsiaro ho toy izany izy ireo, tsy takatr'izy ireo fa isaky ny mandà Palestiniana ao amin'ny sisintany izy ireo, dia manaiky fa eo ny Palestiniana, tsy maintsy mampiasa basy izy ireo mba hitazonana zavatra izay tsy azy ireo akory, matahotra ny mijery anay amin'ny maso izy ireo, fa eto izahay, akaiky, ary ho avy tsy ho ela, fantany fa Misy i Palestina! ” hoy i Samia Ali (solonanarana) nanoratra ny zava-niainany.
Amin'ny fanohizana ny fomban-drazana, tsy namela antsika i Mahmood Al Yousif tamin'ity herinandro ity, mitondra tsiky eo amin'ny tarehy sasany ary mampiketrona ny hafa taorian'ny fanehoan-keviny momba ny orana azo tamin'ny vavaka.
Chanad, etsy ankilany, nandefa lahatsoratra mampihomehy tamin'ity herinandro ity – tantara iray momba ny mpamono afo nanavotra saka izay nianika hazom-boanio tao an-tanànan'i Sanabis!
Tamin'ny raharaha mahatsikaiky raha mbola ao amin'ny Fanjakan'ny Biby ihany isika, izay ao an-tsainy ny hividy ireo zirafan'i Michael Jackson? Eny, misy olona tsy maintsy manavotra azy ireo amin'ny fisiana mampatahotra ao amin'ny Vahiny Voalohan'i Bahrain ao Neverland Ranch.
Farany fa tsy ny kely indrindra, saika nahazo ny vaovaon'ny Gulf Daily News ny Desert Island Boy, maty tao DC i Tariq Khonji, mpanao gazety. … noho ny kaikitry ny hatsiaka tafahoatra!!
Tafahoatra ho an'ny lehilahy tsy mahajanona ary manontany lalana aleha!